Barcelona Vs Real Madrid: Ka Hor Kulankaan Yaa Guulo Badan Labada Koox , Messi Rokoor Ayuu Bartilmaameysanayaa | Somalia News
Kooxda Real Madrid ayaa marti u Barcelona oo ay wada ciyaarayaan kulan ka tirsan wareegga 7-aad ee La Ligaha
Barca waxa ay kulankaas galayaan iyaga oo ku jira booska 9-aad halka Real ay ku jiraan booska sedexaad balse Barca laba kulan ayaa u baaqatay halka Real-na ay u baaqatay hal .
Labada koox ayaa kulanakan galaya iyadoo kulankii wareeggii hore ee La Ligaha ay la kulmeen guul darro ka kala qabsatay Catefa iyo Cadiz.
Xogta Labada koox : Real waxa ay Barcelona La Ligaha ku wajaheen 180 jeer , Real ayaa badisay 73 halka ay qasaareen 72 jeer waxa ayna bar bar dhac galeen 35 kulan
* Real waxa ay ku guuleysteen in Barca ka dhaliyaan 288 gool halka Barcelona iyana ay sameeyeen mid taas la mid ah .
* Messi ayaa ah gool dhaliyaha taariikhiga ee labada koox ee La Ligaha waxa uuna ku leeyahay 18 gool.
* Inkastoo Real ku badan tahay dhanka guusha , hadana waxa ay Barcelona ka badiyeen kaliya 5 jeer oo qeyb ka ah 20 kulan kuwaasi oo yimid tobankii sano ee ugu dambeeyay , waxa ayna Barca badiyeen 10 jeer halka 5 jeerna ay galeen bar bar dhac
* Waxaa xusid mudan in Real badiyeen kulankii ugu dambeeyay La Ligaha ee xilli ciyaareedkii hore waqtigaas oo ay laba gool ku badiyeen .
Previous articleDal kale oo Carab ah oo ogolaaday inuu xiriir la sameysto Israel
Next articleBiden promises free Covid vaccines to all Americans if elected president